Amanqaku kaDanny Flamberg kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UDanny Flamberg
UDanny Flamberg uyiNqununu kwi-Opera Solutions ekhokela iqela lokuThengisa i-Omnichannel. UDanny Flamberg ebesakha iimveliso kunye nokwakha amashishini ngaphezulu kweminyaka engama-25. E-US, eYurophu nase Mzantsi Melika, uncede ukuqala-phambili baba ngabadlali ababalulekileyo kwiimarike zabo kwaye wanceda ukukhokela iimveliso zehlabathi ukuhambisa ukufikelela kwabo, isabelo sentengiso, kunye nobudlelwane nabathengi. Fumana incwadi yakhe entsha enesihloko UkuDanisa ngoGuquko lweDijithali
NgeCawa, Meyi 7, 2017 NgoMvulo, Meyi 8, 2017 UDanny Flamberg
Idatha enkulu ngumnqweno ongaphezulu kunenyani kwimibutho emininzi yentengiso. Imvumelwano ebanzi ngexabiso lesicwangciso seDatha eNkulu inika indlela kumyinge wamantongomane-kunye-iibholiti imiba yezobuchwephesha eyimfuneko kulwakhiwo lwendalo yedatha kunye nokuzisa ulwazi oluqokelelweyo oluqhutywa yedatha ebomini kunxibelelwano olwenzelwe wena. Ungavavanya ukulungela kombutho ukunyusa idatha eNkulu ngokuhlalutya amandla ombutho kwiindawo ezisixhenxe eziphambili: Umbono oCwangcisiweyo kukwamkelwa kweDatha eNkulu njengeyona nto ibalulekileyo